Football Khabar » ‘फिफा बेस्ट’ अवार्डमा लेवान्डोस्की, मेस्सी र रोनाल्डोले कति–कति अंक पाए ?
‘फिफा बेस्ट’ अवार्डमा लेवान्डोस्की, मेस्सी र रोनाल्डोले कति–कति अंक पाए ?
यस वर्ष २०२० को फिफा बेस्ट अवार्ड जर्मन क्लब बार्यन म्युनिख तथा पोल्यान्डका स्टार फरवार्ड रोवर्ट लेवान्डोस्कीले जिते । उनले पोर्चुगलका क्रिस्यिानो रोनाल्डो र अर्जेन्टिनाका लिओनल मेस्सीलाई पछि पार्दै करिअरमा पहिलोपटक सो अवार्डमा बाजी मारे ।
३१ वर्षीय लेवान्डोस्कीले गत वर्ष बार्यनलाई बुन्डेसलिगा र च्याम्पियन्स लिगसहित ट्रिबेल उपाधि जिताउन मुख्य योगादन दिएका थिए । उनले सिजनभरमा कूल ४७ खेलबाट ५५ गोल गरेका थिए । उनी बुन्डेसलिगा, जर्मन कप र च्याम्पियन्स लिग तीनवटै प्रतियोगिताको सर्वाधिक गोलकर्ता थिए ।
यसपटक ‘फिफा द बेस्ट अवार्ड’ जित्दा कसले कति भोट–अंक पाए ? फिफाले सार्वजनिक गरेको नतिजा यस्तो छ–
रोवर्ट लेवान्डोस्की (विजेता) – ५२ अंक
क्रिस्टियानो रोनाल्डो (दोस्रो) – ३८ अंक
लिओनल मेस्सी (तेस्रो) – ३५ अंक
प्रकाशित मिति ३ पुष २०७७, शुक्रबार १०:०९